आचारसंहिताको वैधता- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ९, २०७६ सम्पादकीय
नेकपा संगठन विभागले पार्टी नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूका लागि जारी गरेको आचारसंहितामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । मननयोग्य के छ भने— यी प्रश्न आचारसंहिताको अन्तर्वस्तुमाथि होइन, यसलाई जारी गर्ने नेतृत्व स्वयंको आचारलाई लिएर उठेका हुन् । कुनै पनि संगठनले आफ्ना सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्नु अन्यथा होइन । तर यसको वैधता र पालनाको विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नत्र संहिता हुनु र नहुनु उस्तै हो ।
पहिलो, जब आचारसंहिता जारी गर्ने तथा यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व भएको नेतृत्व पंक्तिकै आम छवि अनुत्तरित प्रश्नहरूले घेरिएको हुन्छ, तब यस्तो संहिता स्वयंले जन्मँदै वैधता गुमाउन पुग्छ । दोस्रो, संहिता कसका लागि भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ— भोलि यो सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिमा लागू हुन्छ कि, पहुँचविहीन तल्लो तहका कार्यकर्ताका हकमा मात्र ? तेस्रो, आचारसंहिता कोरा आदर्शले भरिएको छ कि व्यावहारिक भन्ने विषयले पनि यसको पालनामा फरक पार्छ ।
आचारसंहिताको अन्तर्वस्तु र यसलाई जारी गर्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरूले टेकेको धरातलबीचको अन्तर नै धेरैलाई हास्यास्पद लागेको छ । आचारसंहितामा ऋण, सापटी वा आर्थिक लेनदेनमा विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैरकानुनी कमिसन, करछली, अनियमितताजस्ता अपराध नगर्ने र त्यस्ता केही सूचना भए सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संहिताका यी प्रावधानलाई लिएर नेकपाभित्रै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ— यसप्रति पहिलो जवाफदेही नेतृत्व पंक्ति नै हुनुपर्छ, जसको आडमा या नाम भजाएर व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, बिचौलिया आदिले अनियमितता गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, आफ्नो नाम भजाएर देशको कानुन हातमा लिनेहरूलाई राज्यको नियमनभित्र ल्याउन दलका शीर्ष नेताहरूले अग्रसरता देखाउन नसकेमा यो संहिता केवल एक ढोंग हुनेछ ।
महत्त्वपूर्ण सवाल त, शीर्ष नेतृत्व पंक्तिको आम्दानीको स्रोत र खर्चको एक–एक हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ । यसो भएमात्रै विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको संगत–संसर्गको अर्थ–अनर्थ खुल्न जान्छ । कि त दलका शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई जोसित पनि बस–उठमा छुट छ भन्नुपर्‍यो कि अहिलेसम्मका क्रियाकलापप्रति आत्मालोचना गरेर आगामी दिनमा आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै आचारसंहिताको अर्थ रहन्छ, नत्र यो जग हँसाउने काम मात्रै हुन्छ ।
आचारसंहिताले आफ्ना सदस्यले सादा जीवन र उच्च विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेको छ । विचार त सबैको उच्च नै होला, जीवन कति सादा छ भन्नेचाहिँ अधिकांश नेताको विगत र वर्तमानले बताइहाल्छ । तत्कालीन भूमिगत माले र युद्धरत माओवादी नेताहरूको आचार र जीवनशैली कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ ? आचारसंहिताले कल्पना गर्न खोजेको जस्तो कि अरू नै भन्ने खुला किताबजस्तै छ । फेरि, यदि आफ्नै पसिनाले कमाएको, स्रोत खुलेको र लाग्दो कर तिरेको सम्पत्तिको प्रयोग छ भने त त्यसलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला, नेकपाले बरु यी पक्षहरू खुलाउन जोड दिने कि !
अचेल दलकै केन्द्रीय सदस्यहरूले नै नेतृत्वलाई भेट्न पाइरहेका छैनन् । नेताहरूले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र व्यापारिक प्रयोजनका भेट मात्रै गरेको उनीहरूको गुनासो छ । संस्कार माथिजस्तो छ, तल पनि त्यही सञ्चार हुँदै जाने हो, विरासत सर्दै जाने हो । शुद्धीकरण तलबाट सम्भव हुँदैन, त्यसैले पहिले नेतृत्व नै सुध्रिनुपर्छ । विरोधाभास कतिसम्म छ भने, आचारसंहिताले सामूहिकताको विकास गर्ने भने पनि यही संहिता नै केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगराई पारित गरिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पद विशेषका लागि कुर्सी नै फरक राख्नेदेखि राज्यको नीतिनियम मिचेर सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाउने पनि आचरणजन्य समस्या तल होइन, माथि नै देखिएका छन् ।
आचारसंहितामा ‘कसैलाई पनि हेलाहोचो, एकारान्त तथा तँ भन्न पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । छोरी, छोराको विवाहलाई सरल, मितव्ययी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । रूपमा राम्रा भए पनि यी प्रावधान कति व्यावहारिक हुन्छन्, नेताहरूले नै यसलाई कसरी पछ्याउँछन् ? अव्यावहारिक भएकैले भोलि यो जन्तीको संख्या तोक्ने पञ्चायतकालीन सामाजिक व्यवहार सुधार कानुनजस्तो बन्नु हुँदैन ।
आचारसंहिताका ११ वटै बुँदा ‘आदर्शवादी’ छन् । संहिता मूलत: नैतिक बन्धन हो, यो कोरा आदर्शभन्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने ढंगको बनाइनुपर्छ । र, यो संगठनको माथिल्लो पंक्तिबाटै लागू हुनुपर्छ । मुहान धमिलै रहिरहने हो भने, सुनकै टुटी हाले पनि धाराबाट सङ्लो पानी बग्दैन । माथिल्लो पंक्तिको आचारमा प्रश्न उठुन्जेल तल्लो पंक्ति अनुशासित बन्दैमा दलमा शुद्धीकरण आउँदैन । नेकपामात्र होइन, सबै राजनीतिक दलका हकमा यही नियम लागू हुन्छ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:२४
दूरी छोट्याउँदै मछिन्द्र
काठमाडौँ — पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय टोलीका अघिकांश खेलाडी समेट्दै टिम निर्माण गरेको मछिन्द्र क्लबले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको आठौं चरणमा बुधबार मछिन्द्रले नेपाल पुलिस क्लबमाथि १–० को कठिन जित निकाल्यो । अघिल्लो खेलमा टोलीले हिमालयन शेर्पासँग २–० को अप्रत्यासित हार भोगेको थियो । यो मछिन्द्रको पहिलो हार थियो ।
यद्यपि बुधबार पाएको जितपछि मछिन्द्रले शीर्ष टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँगको दूरी छोट्याएको छ । मछिन्द्र अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमै यथावत् छ । अघिल्लो संस्करणमा पुछारबाट दोस्रो भएपछि बेहोरेको १ अंकको कारबाही घटाएर मछिन्द्रको ८ खेलबाट १६ अंक भएको छ । १ खेल कम खेलेको आर्मी समान अंक भए पनि गोलअन्तरमा अगाडि छ । पुलिससँगको जितपछि मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले अघिल्लो खेलको हारले टोलीमा निराशा आएको टिप्पणीलाई इन्‍कार गरे ।
‘आज हामीले ३ अंक लियौं, खुसी छौं । तर जस्तो अपेक्षा गरेको थिएँ त्यसअनुसार खेल मैदानमा देखिएन । हामीसँग थुप्रै क्षमतावान खेलाडीको समूह छ । उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै अवसरको सिर्जना गर्न सकेनन् । सामान्य पासमा पनि गल्ती गरिरहेका छन् । उनीहरू धेरै हतारिए जस्तो देखियो,’ मनाङ र थ्रीस्टारका पूर्व मिडफिल्डर कटुवालले भने, ‘अघिल्लो चरणमा बेहोरेको पराजयपछि मैले र क्लब प्रशासनले खेलाडीहरूलाई हार बिर्सेर अघि बढ्न भनेका थियौं ।’
अहिलेको स्थितिमा च्याम्पियन बन्ने टिमको भविष्यवाणी गर्न कठिन कार्य भएको कटुवालको ठहर छ । उनका अनुसार लिग उपाधि जित्न मछिन्द्रलाई लिगका बाँकी सबै खेल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । ‘हाम्रा लागि बाँकी सबै खेल उत्तिकै कठिन छन् र शतप्रतिशत जितको विकल्प छैन,’ उनले थपे, ‘अंकतालिका हेर्दा अधिकांश टिमका लागि लिग खुला छ ।’
सात खेलबाट नेपाल पुलिसको ११ अंकमात्र छ । टोली अंकतालिकामा छैटौं स्थानमा छ । लिगमा तेस्रो हार बेहोरेको पुलिसका प्रशिक्षक अनन्त थापाले लिग उपाधिको दौडमा आफूलाई ठूलो धक्का लागेको स्वीकारे । ‘हाम्रा लागि यो खेल जित्नैपर्ने थियो । यसले च्याम्पियनको दौड लगभग असम्भवजस्तै बनेको छ,’ उनले भने । प्रशिक्षक थापाले आफ्नो टिमको हारको कारण गोलरक्षक शत्रुधनकुमार चौधरीको अपरिपक्व प्रदर्शन भएको बताए । ‘कर्नरछेउबाट रन्जित (धिमाल) ले हानेको फ्रिकिक मेरो गोलकिपरले रोक्न सक्ने थियो । बचाउन सक्ने बलमा ऊ चुक्‍न पुग्यो,’ थापाले भने, ‘स्कुलब्वाइ एरर जस्तो देखियो ।’ दशरथ रंगशालामा खेलको पहिलो हाफ निरस थियो । दुवै टिमले गतिलो आक्रमण आधार तय गर्न सकेनन् । मछिन्द्रले बल पोसेसनमा पुलिसलाई पछि पारे पनि आपसी तालमेलमा कमजोरी गरिरहेको थियो ।
पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा रन्जित धिमालको फ्रिकिकमा पिटर सेगुनको हेड गोललाई रेफ्री प्रकाश श्रेष्ठले अफसाइड करार गरिदिएपछि मछिन्द्रले अग्रता लिन चुक्यो । दोस्रो हाफ केही चलायमान बन्यो । दुवैले एकअर्काका पोस्टमा केही आक्रमण गरेका थिए । ५३ औं मिनेटमा मछिन्द्रले अग्रता बनायो । पुलिसका डिफेन्डर अजित भण्डारीले ह्यान्ड गरेपछि दायाँ कर्नर नजिकैबाट पाएको फ्रिकिकमा रन्जितले आकर्षक गोल गरे । त्यसको ७ मिनेछपछि दायाँ कर्नर नजिकैबाट मछिन्द्रले अर्को फ्रिकिक पायो । विशाल राईको प्रहार पुलिसका गोलकिपर शत्रुधनले पन्च गरेर बचाएपछि मछिन्द्रको अग्रता दोब्बर बनाउने प्रयास असफल भयो । ८१ औं मिनेटमा मछिन्द्रको अर्को गोललाई रेफ्रीले अफसाइड लिइदिए । सुजल श्रेष्ठले बक्सबाहिरबाट गरेको प्रहार शत्रुधनले राम्ररी नियन्त्रण गर्न नसक्दा विशाल राईले रिबाउन्ड बलमा गोल गरेका थिए ।
दोस्रो हाफमा पुलिसले पनि गोलका केही अवसर पाएको थियो । ७१ औं मिनेटमा वैकल्पिक स्ट्राइकर नीरकुमार राईको प्रहार मछिन्द्रका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठले पन्च गरे पनि बल पुलिसकै सन्तोष हेमरनको टाउकोमा लागेर क्रसबार नजिकैबाट बाहिरिएको थियो । ७५ औं मिनेटमा अर्का वैकल्पिक भोला सिलवालको फ्रिकिक पनि विशालले क्लियर गरिदिए । खेलको अन्तिम मिनेटमा सौजन राईले २५ यार्डको दूरीबाट प्रहार गरेको फ्रिकिक विशालले नै पन्च गरेर बाहिर पठाएका थिए ।
हिमालयन शेर्पाविरुद्ध थ्रीस्टार
प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:०८